विचार Archives - Page3of 8 - Paschimnepal.com
Sep282017 by Paschim NepalNo Comments
प्रकाशित मितिः बिहिबार, अशोज १२, २०७४ |
नारायण पौडेल कृषि बैज्ञानिक मदन राई ठोकुवा गर्छन, ‘भारत र चीनको शक्तिको तुलना नै हुँदैन । कारण भारत छुवाछुत र विभेदले ग्रस्त छ । चीनमा त्यस्तो छैन । समाजको विकासलाई सामाजिक मनोविज्ञानले धेरै असर गर्छ ।’ दुबै देशलाई नजिकबाट नियाँलेका राईले नेपाल बन्न नसक्नुमा पनि छुवाछुतलाई कारक मान्छन् । श्रमप्रति विकर्षण र अपमान जातिय कारणले पनि उब्जिएको उनको मत छ । काम गर्ने जाति लाई ‘यो कामी, यो ह
Sep222017 by Paschim NepalNo Comments
जाजरकोटलाई सिंहदरवारले चिन्ने वनाउने अवसर
हिजो जनयूद्ध चलिरहदा जाजरकोट नाम लिन वितिकै तत्कालिन राज्य सत्ताले आतंककारी को सुचीमा यहाँको माटो र जनता लिने गर्दथ्यो । अनेक दुख ,पिडा अनि वेदना संग जुझदा ,जुझदै यहाँका नागरिक हरुले तेतिवेला आतंककारीकै पगरी गुथाएर राज्यले जाजरकोटलाई विश्ववजारमा नाम विक्री गरेको थियो । त्यो नेपालको नाम थाह नपाउँनेले जाजरकोटको जुनी र यहाँका दर्जनौ वस्ती थाह पाउने गर्दथ्यो । त्यही जुनी र यहाँका सयौँ सहिदको वलिदानी
Sep42017 by Paschim NepalNo Comments
प्रकाशित मितिः सोमवार, भदौ १९, २०७४ |
प्रेमबहादुर शाही मानिसले गर्ने दुःखको कुनै सीमा हुँदैन । कतिपयले जानी–जानी दुःख गरेका हुन्छन भने कतिपयले चाहिँ नजानेर । ती दुःखबाट कतिले प्रतिफल पाएका छन त कतिले नपाएका पनि । यस्तै प्रतिफल नपाउने दुःखमा छन सिङ्गो कर्णालीबासी । मैले कर्णालीमा राज्यको नजर नपुगेको सानै छँदा सुनेको थिएँ । मेरो मनमा त्यो कर्णाली क्षेत्र भनेको कस्तो होला ? किन राज्यको नजर पुग्न नसकेको होला ? जस्ता अनगिन्ती प्रश्न आइरहन
यस कारण शक्ति वस्नेत गलत
अविरल यात्री सुनिन्छ र भनिन्छ जाजरकोट भन्न वितिकै गरिव , उत्पडित जनताको ठुलो जमात छ । यहाँ भएभरको रोग, खाद्य संकट , अभाव र अराजकता वाध भित्र जाजरकोको नाम लिनेको संख्य ठुलो छ । के साचिकै जाजरकोट यस्तै छ त ? जाजरकोटलाई चिनाउने पर्यटकिय स्थल र अवैको नदेखिएको वा नदेखाएको ठुलो सम्पती पनि छ । हाम्रो एकपक्षिय असन्तुलित विचारका कारण सधै अभावै अभाव मात्र देख्ने हाम्रा आँखामा अव जाजरकोट संवृद्धशिल वन्दै छ
Aug292017 by Paschim NepalNo Comments
खोई उपभोक्ताको खाद्यअधिकार स्वच्छता ?
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, भदौ १३, २०७४ |
मीन ठकुरी चाँडपर्बको समय आएको छ । यो समयमा उपभोक्ताहरु आफूलाई चाहिने दैनिक उपभोग्य सामग्री बढी खरिद गर्ने गर्छन् । अझ भन्दा चाडपर्बको बेलामा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको खपत बढी हुन्छ । यही मौका छोपेर दैनिक उपभोग्य बस्तुमा छयाप्छ्याप्ती मिसावट पाइने गरेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुमा दाल, चामल, तेल, पिठो, दूध, तरकारी लगायत अन्य खाद्यवस्तुमा मिसावट पाइने गरेको छ । बजारमा म्याद नाघेका, खान अयोग्य वस्
Aug262017 by Paschim NepalNo Comments
सुदूरपश्चिमको महान पर्व गौरा
प्रकाशित मितिः शनिबार, भदौ १०, २०७४ |
मीन ठकुरी धर्म, संस्कृतिले समाजमा ठूलो प्रभाव पारेको हुन्छ । त्यहीभित्र मानिस बाँधिएको हुन्छ । त्यही धर्म, संस्कृतिभित्र मानिसले आफ्नो व्यवहारलाई समावेश गर्दछन् पनि । यो पर्व विशेषगरी धार्मिक आस्थामा आधारित छ । धार्मिक आस्थासँगै गौरालाई मनोरञ्जन दिने अर्को पक्षका रुपमा लिने गरिन्छ । त्यसैले पनि गौरा पर्वको धार्मिक, सांस्कृति महत्व बढ्दै गएको मान्न सकिन्छ । सन्दर्भ सुदूरपश्चिममा मनाइने गौरा पर्व
Aug112017 by Paschim NepalNo Comments
सन्दर्भ १३ अाैं डेकेन्द्रराज स्मृति सभा : अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता समाप्तको दिन
प्रकाशित मितिः शुक्रबार, साउन २७, २०७४ |
पत्रकारले स्वतन्त्र भएर कलम चलाउन पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो । यसमा कसैले यस्तो उस्तो किन लेखेको ? भनेर कसैले गुनासो गर्न पाउछ तर प्रश्न चिन्ह लगाउन पाउँदैन । पत्रकारले सधै आफ्नो आँखाले जे देख्छ, त्यहि लेख्छ । अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता पत्रकारको पहिचान हो । पत्रकारलाई राज्यले चौथो अङ्ग भनेर घोषणा गरेको छ । तर राज्यले आफुले गर्नु पर्ने काम पूरा गर्न सकेको छैन । त्यस कारण पत्रकारहरु दिनदाहडै अनकौ
Aug92017 by Paschim NepalNo Comments
‘सम्झनामा साउन २५’
प्रकाशित मितिः बुधबार, साउन २५, २०७४ |
रेडियोमा काम गर्ने भए पनि त्यसदिन मध्यान्न १२ बजेको समाचार बुलेटिन पढ्ने जिम्मा मेरो थिएन । तर त्यस दिन करिब साढे एघार बजेतिर स्टेशन म्यानेजरले फोन गरेर आज १२ बजेको बुलेटिन तपाइले पढ्नुपर्ने भो गोविन्द जी भन्नुभयो । प्रदेशको सिमांकनको विषयलाई लिएर मध्यपश्चिममा विशेषगरी सुर्खेतमा अखण्ड मध्यपश्चिमको माग राखेर आन्दोलन चर्कीरहेको थियो । केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरुले सुर्खेतसहित मध्य
Aug82017 by Paschim NepalNo Comments
पर्यटकिय गन्तव्य ‘महावु’
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, साउन २४, २०७४ |
दैलेख जिल्लाको उच्च हिमालमा रहेको महावु धाम धार्मिक तथा पयर्टकिय क्षेत्रकोरुपमा लिन सकिन्छ । नेपालमा विभिन्न राजनैतिक फेरवदल भए देशमा लोकतन्त्रको बहाली पछि देश संघियतामा प्रवेश गरे सगै स्थानिय तहको चुनाव समेत भई सकेको अवस्थामा जनप्रतिनिधीहरु कामकारवार्ही सुरु गरको भएपनि यस वर्षको बजेट पूर्वाधार तर्फ बढिनै खर्च गरेको भएपनि पर्यटकिय क्षेत्र र यसको सम्वद्धन तथा निमार्णकालागी पुग्दो रकम छुटाउन नसको अव
Jul162017 by Paschim NepalNo Comments
चलचित्र समिक्षा : ‘बाटो मुनिको फुल –२’ नेपाली समाजको यथार्थ चित्रण
प्रकाशित मितिः आइतवार, साउन १, २०७४ |
जातिय छुवाछुत अहिलेको मात्र समस्या होइन । नेपाली समाजमा सदियौ देखि जरो गाडेर बसेको कुपर्था हो । एउटै समुदायको वरिपरी बस्ने रातै रगत, एउटै वर्ण अनी एउटै लुवाई खुवाई भएका व्यक्तिहरु विच तल्लो जात र माथिल्लो जातको दर्जा दिइएको छ । समग्रमा विश्वमा छरिएर रहेका सबै मान्छे नै हौ तर पनि हाम्रो नेपाली समाजमा तल्लो जात“दलित” र माथिल्लो जात ब्रामण, क्षेत्री, बाहुन उपनाम दिइएको छ । जसले समाजमा अझै पनि तल्लो ज